တောင်သူများ၏ အခက်အခဲများကို အခမဲ့ ကူညီပေးမည့် စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အသင်းရုံးခွဲ ဖွ? - Yangon Media Group
တောင်သူများ၏ အခက်အခဲများကို အခမဲ့ ကူညီပေးမည့် စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အသင်းရုံးခွဲ ဖွ?
မကွေး၊ ဇွန် ၂၈
မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီးအတွင်းရှိ တောင်သူများ၏ အခက်အခဲများကို အခမဲ့ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအသင်း (မကွေး တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ)ကို မကွေး တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
”အသင်းကြီးက တောင်သူ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင် နေတာကြာပါပြီ။ အသင်းရုံးခန်း ကိုတော့ ဇွန် ၂၆ ရက်ကမှ ဖွင့် ဖြစ်တာပါ။ အသင်းကြီးကနေ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက လယ်ယာကဏ္ဍမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တောင်သူတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင် ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ပါ။ တောင်သူတွေအတွက် စိုက်ပျိုးဖို့ မျိုးစေ့ပြဿနာ၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ် မြေဆီလွှာအာဟာရပြဿနာစတဲ့ တောင်သူတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲ ဘယ်လိုပြဿ နာဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင် ရွက်ပေးသွားမှာပါ”ဟု မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင့်လွင် ကပြောသည်။ အဆိုပါ အသင်းသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၂၅ မြို့နယ်မှ တောင်သူဦးကြီး အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည့်လုပ်ငန်းများ အပြင် အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တောင်သူများ ပေါင်း ဆက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
”စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေ ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက တောင် သူတွေကို အကူအညီပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေ လုပ်မယ်ဆိုတော့ တောင်သူတွေအနေနဲ့ အတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းသာရပါတယ်။ အခုချိန်မှာ တောင်သူတွေမှာက အခက်အခဲ တွေ အများကြီးဘဲရှိနေပါတယ်” ဟု တောင်သူ ဦးတူးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရအသင်း (AUAA) တွင် အလုပ် အမှုဆောင် ၂၁ ဦးရှိပြီး အသင်းသား ၂၈ဝ ရှိကာ အသင်းကြီးမှာ နိုင်ငံတော်မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထား သော အသင်းကြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ - အိန္ဒိယနယ်စပ် မြို့များမှတစ်ဆင့် နယ်စပ်အတွင်းပိုင်း မြို့များသို့ ခုနစ်ရက်ကြာ အလည်